Falanqeyn kooban oo ku saabsan "Hopscotch" waxaa qoray Julio Cortázar | Suugaanta hadda jirta
Falanqeyn kooban oo ku saabsan «Hopscotch» waxaa qoray Julio Cortázar
Carmen Guillen | | Buugaag, Suugaanta
Kan ugu yar ee akhriya maqaalkani waa hubaal inaad ka fekereyso "Hopscotch", shaqada aasaasiga ah ee Julio CortazarSida buugga "tostón" ee ay macallimiinta suugaanta u diraan mar uun machadka. Kuweena hore u soo maray taas, si qasab ah ayaan u aqrinay "Hopscotch" Maalmaheenii yaraa ka dibna dib ayaan u aqrinay (runtiina waxaa jira kuwo badan oo naga mid ah, aniga ayaa ku jira) dhawr sano ka dib, waxaan ogaanay ma aha oo kaliya ahmiyadda buugani u leeyahay taariikhda suugaanta laakiin sidoo kale sidee uga duwan yahay aqlabiyada.
"Hopscotch", lagu daabacay 1963, waa tixraac aasaasi ah oo suugaanta Isbaanishka ah. Isaga qaab dhismeedka dabacsan waxay u oggolaaneysaa akhris kala duwan, sidaa darteedna, fasiraado kala duwan. Qaabkan akhriska, waxa uu damacsanaa Julio Cortázar wuxuu ahaa matalaan fowdada, fursadda nolosha iyo xiriirka aan muran ku jirin ee u dhexeeya waxa la abuuray iyo gacanta farshaxanka sameeya.
Hadaadan wali aqrin "Hopscotch" oo aad ku fikirayso inaad sameyso, halkan ku jooji, ha sii wadin aqrinta ... Haddii aadan qorsheyneynin inaad aqriso, sidoo kale jooji, waxaan kugu dhiiri gelinayaa inaad sidaas sameyso ... Marka aad dhameyso, dib ugu noqo oo aqri wax alla wixii aad rabto ... Laakiin sheekada dhabta ah waxaa qoray Julio Cortázar.
1 Falanqaynta «Hopscotch»
1.1 Buugga koowaad
1.1.1 "Dhinacaa jira"
1.1.2 "Dhinaca halkan"
1.2 Buugga labaad
1.2.1 Dhinacyada kale
1.3 Cutubka aan ugu jeclahay: cutubka 7aad: dhunkashada
2 Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan buugga "Hopscotch"
2.1 Waa kuma halyeeyada Hopscotch?
2.2 Sixiroolaha waa kuma?
2.3 Waa maxay magaca wiilka sixirrowga ah?
2.4 Waa maxay jinsiga Cortázar?
Kahor intaanan dhihin waa shaqo ka duwan kuwa kale maxaa yeelay tan waxay tusinaysaa kaqaybqaadashada firfircoon ee akhristaha. Laba akhrin oo buugga ah ayaa lagu soo bandhigayaa guddiga maamulka (sida magaceedaba ka muuqata, ciyaarta caadiga ah ee hopscotch ee aan dhammaanteen ku ciyaarnay munaasabadda). Qaab dhismeedka noocan ahi wuxuu ku burburay wax kasta oo la aasaasay illaa iyo inta suugaanta laga hadlayo.
Buuggii ugu horreeyay ee "Hopscotch" waxaan ku aqrin doonnaa a amar toosan, ku dhammaanaya cutubka 56aad. Waxaa sameeyay Laba qaybood: "Dhinacaa jira" y "Dhinaca halkan". Labadaba, sheekada lama huraanka ah ama sheekada buugga waa la soo bandhigay.
Horacio Oliveira wuxuu tarjubaan ahaan ugu shaqeeyaa magaalada Paris. Halkaas ayuu Naadiga kula aasaasay asxaabtiisa qaarkood, halkaas oo uu ku dilo waqtiga hadalka ama dhageysiga muusikada jazz. Wuxuu ilaaliyaa xiriir jacayl leh Lucía, la Maga, oo reer Uruguay ah oo ah hooyada canug ay ugu yeerto Rocamadour. Si kastaba ha noqotee, xiriirka gaarka ah ee ka dhexeeya labada ayaa sii xumaanaya. Mid ka mid ah kulamadooda, Rocamadour wuxuu si lama filaan ah u dhintay, natiijada ka dhalatayna, Lucía wuu baaba'ay wuxuuna ka tagay dhowr khadad oo qoran.
"Dhinacaa jira"Si kale haddii loo dhigo, qaybtan koowaad waxay ku dhammaatay sawirka hopscotch, dunta guud ee buugga oo dhan mataleysa ee raadinta dheelitirka (cirka).
Waxqabadka qaybtan buuggu wuxuu ka dhacayaa magaalada Buenos Aires. Kahor intuusan halkan imaan, Oliveira wuxuu si ba'an u raadinayaa La Maga ee Montevideo. Dib ugu noqosho Argentina, wuu ku khaldamaa naag kale.
In Argentina, wuxuu ku soo laabtay saaxiibtinimadiisa Safarka wuxuuna la kulmay xaaskiisa, Talita, oo xusuusisay La Maga daqiiqaddii ugu horreysay. Wuxuu la shaqeyn doonaa lamaanahan goob circus iyo rug caafimaad oo dadka dhimirka ka jiran. Laakiin Oliveira waxaa hareeyay astaamaha horumarka ah ee isku dheelitir la'aanta maskaxda. Jahwareerkiisa ayaa ka dhigaya inuu u maleeyo inuu arko La Maga waqti kasta halkii uu ka ahaan lahaa Talita. Tani waxay kuu horseedi doontaa xiisad kaa dhigeysa inaad ka fikirto is-dilid. Wuxuu isku dayaa inuu is dilo laakiin ugu dambeyntii Socotada iyo Talita ayaa ka hor istaagaya inuu ka dhaco iibka ilaa barxada guriga lagu sawiro.
Buugga labaad waxaan ku haynaa aqrin labaad y wuxuu ka bilaabmaa cutubka 73aad. Asal ahaan waxaan ka heli doonnaa waxyaabo cusub oo lagu soo kordhiyay muuqaalka, "Cutubyada la bixin karo", qaab dhismeedka qorshaha oo horay loogu sharaxay buugga.
Muuqaalladani waxay ka kooban yihiin aragti qoto dheer oo isku mid ah, oo isku xirnaanta qarsoon lagu muujiyo. Laakiin intaa waxaa sii dheer, jilayaal ay ka mid yihiin Morelli ayaa u muuqda, qoraa duug ah oo qoraagu u adeegsanayo inuu ku kashifo qaar ka mid ah furayaasha Hopscotch: furan, jajaban, carqalad iyo ka qaybqaadasho cusub taasi waxay ka tarjumaysaa fawdada dhabta ah laakiin ma amarto mana sharraxdo.
Cutubka aan ugu jeclahay: cutubka 7aad: dhunkashada
Waxaan taabanayaa afkaaga, farta waxaan ku taabanayaa cidhifka afkaaga, waxaan u sawirayaa sidii inay gacantayda ka soo baxayso, sidii oo ay tahay markii ugu horaysay ee afkaagu waxyar furmayo, oo waxaan u baahanahay inaan indhaha isku qabto inaan wax walba dib u furo oo aan dib u bilaabo, waxaan sameeyaa afkii aan jeclaado, afkii gacantaydu doorto oo wejigaaga ku jiito, oo afka laga wada doorto, oo leh xorriyad gobonimo leh oo aan u doortay inaan ku sawiro anigoo gacanta ku haya wejigaaga, iyo in jaanis aanan doonaynin in aan fahmo ay ku soo beegmayso si sax ah afkaaga oo dhoola cadeynaya ka hooseeya kan ay gacantaydu kugu jiidaneyso.
Waad i fiirisaa, si dhaw baad i fiirisaa, aad iyo aad ayaan u sii fiiriyaa ka dibna waxaan ciyaareynaa xirmooyinka, waxaan si aad u dhow u fiirineynaa indhahana wey weynaanayaan, way isku soo dhowaanayaan, way isdulsaarayaan iyo cyclops ayaa midba midka kale fiirinayo , neefta oo jahwareersan, afkooda waxay la kulmaan oo si diiran u dagaallamaan, midba midka kale wuxuu ku qaniini karaa bushimaha, si dhib yar ayuu carrabkooda ugu dulsaarayaa ilkihiisa, wuxuu ku ciyaarayaa xeryahooda halkaasoo hawad culus ay timaado oo ay la socoto cadar duug ah iyo aamusnaan. Markaa gacmahaygu waxay raadinayaan inay dhex galaan timahaaga, si tartiib ah u salaax qoto dheer timahaaga intaan dhunkanayno sidii inaan afkeenna ka buuxo ubax ama kalluun, dhaqdhaqaaqyo nool leh, oo leh udgoon madow Oo haddaynu is qaniino xanuunku waa macaan yahay, oo haddii aynu ku dhex dhex galno nuugid kooban oo naxdin isku mar ah, dhimashada degdega ahi way qurux badan tahay. Oo waxaa jira hal candhuuf iyo hal dhadhan oo keliya oo miraha bislaaday, waxaanan dareemayaa inaad iila gariirayso sida dayaxa oo kale oo biyo ku jira.
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan buugga "Hopscotch"
Waa kuma halyeeyada Hopscotch?
Halyeeyga sheekada waa Horacio Oliveira. Waa nin u dhashay Argentine qiyaastii 40-45 sano. Waa nin waxyaabo badan yaqaana oo wax barasho u aaday Paris laakiin wali ma baran. Taabadalkeed, wuxuu ka shaqeeyaa caawinta kala soocida boostada.
Waxaa la ogyahay inuu leeyahay walaal ku nool Argentina. Iyo inuu yahay ninka caadiga ah ee umuuqda inuu si joogto ah wax u raadinayo (mararka qaar isagoo dareensan inuu horey u haysto wixii uu raadinayay ...).
Sixiroolaha waa kuma?
Sixiroolaha waa Lucia, oo ah jilaa kale ee sheekadan. Isaguba wuxuu deganyahay Paris, laakiin wadankiisa hooyo waa Uruguay. Wuxuu leeyahay wiil magac qalaad leh: Rocamadour. Si ka duwan Horacio, waa gabar aan wax badan ka aqoon wax ku saabsan, taas oo ka dhigeysa inay dareento mararka qaar xoogaa qiimeyn ama wax yar oo kuwa kale ku xiga.
Qodobadiisa xoogan ayaa ah inay leedahay jilicsanaan iyo nacasnimo badan, wax ku dhaca jacaylka isha qaawan iyo sidoo kale inay ka maseyraan astaamaha kale ee labaad ee ku jira sheekada. Horacio waxay sixiroole ah uga masayrtaa awooda ay u leedahay inay ku dhiirato inay ku noolaato khibrado cusub, si ay u qoyso markay ciyaarayso iyo inay noqoto geesinimo.
Waa maxay magaca wiilka sixirrowga ah?
Sidii aan ku sheegnay qodobkii hore, wiilkiisa waxaa loo yaqaan Rocamadour laakiin magaciisa dhabta ah waa Francisco. Waa ilmo bil jira oo ay markii hore daryeesho Madame Irene, oo xukumad ka talisa. Ugu dambeyntiina, wiilku wuxuu la nool yahay La Maga iyo Horacio, dhacdo dhacdo kicisa ayaa la dhacda isaga. Xaqiiqadani waa qayb aasaasi ah oo ka mid ah riwaayadda.
Waa maxay jinsiga Cortázar?
Su'aashani waxay keenaysaa "khilaafaad" weyn oo ka dhex jira dadka naqdiya suugaanta, maaddaama shaqadiisu ay adag tahay in la kala saaro. Wuxuu qoray buugaag, laakiin sidoo kale gabayo; si kastaba ha noqotee, Julio Cortázar wuxuu u muuqdaa inuu yahay Realism Magic. Noocani waa mid shaqsiyeed, waa mid soo socota, oo had iyo jeerna "cayaara" inta udhaxeysa dhabta iyo cajiibka. Iyadoo ay taasi jirto, waxaa jira kuwa wali ku adkeysanaya inay dhigayaan Boomka Latin America ee caanka ah.
Buugaagta ugu wanaagsan suugaanta Latin Amerika
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Falanqeyn kooban oo ku saabsan «Hopscotch» waxaa qoray Julio Cortázar
Aragtida wanaagsan ee hopscotch, aad u wanaagsan, waxaan ku siinayaa hal macluumaad oo dheeri ah haddii aad rabto inaad ku darto, cutubka 62 ee hopscotch wuxuu ku sii socdaa buug, waxaan ula jeedaa, waa bilowgii buug la yiraahdo 62 / moodel isug ururso, halkan Buenos Aires Waxaan dhahnaa rayuelita, waxaan rajeynayaa in macluumaadkan uu kuu adeegi doono, maadaama hopscotch uu haysto qasacad in muddo ah
Waxaan u maleynayaa inay aad ufiican tahay maxaa yeelay waxaan jeclahay inaan waxbadan aqriyo tanina waxay ku saabsanayd shaqada guriga oo hada hadii aan sifiican u fasiri karo sharaxaadda maxaa yeelay waan aqriyay buuga oo dhan, aad ayaad u mahadsantahay.
Ku jawaab stefanny
Hore ayaan u bilaabay
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado meesha (counter) sheeko cusub ee Holiveira lagu sheegay inay tahay turjumaan.
34 sano kadib abuurkeedii, abwaankii waxaan mar kula kulmay Venezuela, isagoo caruur ah, sidaan idhi, waxaan qoraa wax hopscotch ah.
Hopscotch ama Tread.
Tallaabooyinka ugu horreeya ayaa horeyba loo bilaabay
Caajis caajis ah
Jirku wuu laaban yahay, is waafajin fiican
Jaantusku wuu kici karaa
Wiilkii ayaa ku hadaaqay, waa taydii!
Noloshu waa caddeyn, marar badan
Waxaad heli doontaa adduunyadaada iftiinka.
Waan talaabsaday, waan talaabay, nambarkayga sixirka
Isku soo dhawaada adduunyadeenna
Dhallaanka maskaxdayda ku jira ayaa ah
Hilowga carruurnimada, dambi la'aan.
Bilow noloshaada, hopscotch waxaad tahay
Dhamaadka, nasasho, nasasho
Isagoo faraxsan, u kac dugsiga
Alifafyada la tuntay, yaamayska ay tagayaan
Hopscotch kor u kacaya
Khadadkaaga infinity wuxuu tagaa
Carlos Garcia. 2016 (+1) / 31/10. Maalinta caalamiga ah ee netizen heesta.
Jawaab carlos garcía garcía
macluumaadka la soo bandhigay ma ahan mid qaabeysan, fikradaha la soo bandhigay ma ahan kuwo cad oo kooban, qoraallo badan oo aasaasi ah ayaa ka maqan faham fiican oo ku saabsan sheekada
Ku jawaab PROFE
Waxaan jeclaaday CortÁZAR
BOOGAYGA AAN KU ISTICMAALO SI AAN U GALO QORYAALADAAS IYO QORYAALAHA PEDAL YAHAY HADII AY YIRAAHDO WAQTI KASTA OO AY KU YIMAADAAN BAASKIIL QORAALADOODA
SIDOO KALE WAA DASTUUR SABAB (OO AAN ISKU TAHAY) SI AAD U AKHRISO SHAQADA OO DHAN HADII AY KU HABO
WAQTIGA WAQTIGA WAAN ARKAA JOOGTADA BAASKIILKA OO AH CADAYNTA XASAASIYADA Qoruhu
CORTÁZAR AYAA LEH Iyaga Iyo Qaar Aad U Fiican
AAD BAAD U MAHADSAN TAHAY MACLUUMAADKAAGA IYO HAMBALYO BOGGA
WAAN KU HAYAA SAWIRADA BAASKIILADA
WAAN SOO SAARI DOONAA SIDOO KALANA XASUUS AYAAN IDIIN QAADAN doonaa
MA DHICI KARI KARTO XATAA HADDII AAN QAADO INAAN DIB WAX KASOO QAADO RAYUELA SHEEKOOYINKA AMA HURGAR EE TAARIIKHDA
HADDII QOF QAADO ...
Jawaab ku sii Anton Vea Campos (@Antonbvici)
Cortazar wuxuu ku sifoobayaa Suugaan Fantastic ah, oo uusan ku sifoobayn Realism Magic !!
aragga wanaagsan ee hopscotch, aad bay ufiican tahay aniga waxay ila tahay inay tahay shaqo ka duwan kuwa kale maxaa yeelay tan waxay ku tusinaysaa kaqaybqaadashada firfircoon ee akhristaha.
Jawaab Sebastian Castro
Runtu waxay tahay markaan aqriyay Hopscotch waxay umuuqatay buug cufan oo xad dhaaf ah. Waxaad i siisay qallooca fekerka, ilaa heer aan dib u akhrin doono anigoo rajeynaya inaan helo fowdadaas iyo cadowgaas ay aad uga hadlayaan.
Goob aad ufiican !!! Jacaylka suugaanta waxaa dareemaya kuwa la wadaagay bogaggan hagida. Waxaad dareemeysaa deeqsinimada ...
Sida aan loo ogaan Hopscotch, iyo sida loo ogeyn Cortazar inuu yahay mid ka mid ah tiirarka sheekada qorista Isbaanishka. Si fudud titan beerta. Maqaal aad u fiican.
Frankenstein. Mary Shelley's classic waxay jirsatay 200
Buugaagta ugufiican 2017 ee aadan joojin doonin akhriska